Izimanga ezi-4 zokuba ii-equities zaseSpain zingasizisa | Ezezimali
4 iyothusa into yokuba ii-equities zaseSpain zisizisele
Ikota yesibini yonyaka inokuzisa isimanga esingaqhelekanga ngokubhekisele kwisitokhwe se-Ibex 35 ekufuneka senze ipotifoliyo yotyalo mali ebusweni, ubuncinci ekupheleni konyaka. Zixabisekile ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile zilibalekile ngabahlalutyi beemarike zezabelo kwaye nakweyiphi na imeko banokwenza ngcono kunabanye ukusukela ngoku. Phakathi kwezinye izizathu ngenxa yokuba beziphethe kakubi ngexesha lokugqibela lokunyuka kwimarike yesitokhwe kuzwelonke. Ngamanye amaxesha, nge amandla aphezulu ngaphezu komdla ngoku.
Esi sicwangciso sotyalo-mali sinokuba yinto enomdla kakhulu ukuyenza kuba ayothusi into yokuba ukusukela ngoku kukho izinto ezinzulu ukulungiswa kwamaxabiso kwizabelo zeenkampani. Ngokuwohloka komgangatho wobuchwephesha kwaye oko kungakhokelela ekubeni amanye amaxabiso esitokhwe asuke ekuvuseleleni aye kwi-bearish, ubuncinci kwixesha elifutshane naphakathi. Ngelixa kwelinye icala, kukho amaxabiso amaxabiso eSpain athe angena kwiiseshoni zokugqibela zokuthengisa kwimeko yokunyuka simahla, yenye yezona zilungileyo abanokuhamba kuzo.
Nokuba yeyiphi na indlela, icacile ithuba lokuthatha izikhundla nokwenza imisebenzi ibe yinzuzo kwithuba elingelolide kakhulu. Ukuza kuthi ga ngoku, zezinye zezona zindululo ziphakanyisiweyo zentengiso yemasheya ngabahlalutyi abagxile kwimarike yezabelo. Nangona ingesiso isizathu sokuthatha amanyathelo okhuseleko ukuthintela umngcipheko ongeyomfuneko kuzo zonke iimeko. Kodwa kuhlala kubonakala ngathi bazakuyenza ngcono kakhulu kunezinye iinkampani ezidweliswe kwiimarike zesizwe. Ngemisebenzi ejolise kwixesha elifutshane kunye nelona liphezulu.
1 IMapfre iza kunika ezinye zezimanga
2 I-Endesa idweliswe kwii-euro ezingama-26
3 I-Cellnex ibuyela kuhlaselo
4 Amadeus, amaxabiso ngakumbi kwimarike yemasheya
IMapfre iza kunika ezinye zezimanga
IMapfre ivelise kunyaka ophelileyo isiphumo sokusebenza kwe-702 yezigidi ze-euro kwi-2018, i-0,3% ngaphezulu kunonyaka ophelileyo. Nangona kunjalo, ukuphela kwe-2018, inkampani igqibe kwelokuba yomeleze ibhalansi yayo ngokunikezela i-173 yezigidi zeerandi ekonakaleni kwenxalenye yomnqweno omhle ekusebenzeni Iinshurensi eMelika, e-Itali naseIndonesia. Oku kwenziwa ngenjongo yokuziqhelanisa neemeko zentengiso ezintsha, ukugcina inzuzo kubanini zabelo kunye nokubeka iziseko zokuqhubeka nokukhula ngenzuzo. Emva kokubalwa kwemali kwesi siphumo, inzuzo yonyaka ibime kwi-529 yezigidi ze-euro, i-24,5% isezantsi kunaleyo ibhaliswe kwi-2017.
Ukuhla kwengeniso yemali ngenxa yamazinga enzala asezantsi, ukwehla kweemali (ezibe nefuthe kwisiphumo se-17 yezigidi zeerandi), indleko yeziganeko eziyintlekele (ikakhulu iinkqwithela kunye neenkqwithela zasebusika), nefuthe kwishishini lokuqinisekisa kwakhona yezigidi ezingama-97 zeerandi, kunye nokuphinda ubonakalise ngenxa yokunyuka kwamaxabiso eenkxaso-mali eArgentina (kuba ithathwa njengelizwe elinemali eninzi ngenxa yokuba inexabiso eliqokelelweyo elingaphezulu kwe-100% kule minyaka mithathu idlulileyo), kunye iimpembelelo ezimbi ze-18 yezigidi zeerandi, babe nefuthe elibi kwisiphumo.
I-Endesa idweliswe kwii-euro ezingama-26
Inkampani yamandla ibibonakala ngathi igqibile ngokunyuka kwayo kodwa khange ibenjalo. Akukho kuncinci, ukuba akunjalo ngokuchaseneyo kuthathe amandla amatsha kwaye yonke into ibonakala ngathi iya kunyuka iye kwinqanaba lama-26 euros ngesabelo ngasinye. Ngamanye amagama, isenoluluko oluphezulu kakhulu kwaye inomdla kakhulu ukuthatha izikhundla ukusukela ngoku. Kulindeleke kakhulu ukuba eli nqanaba kumaxabiso alo emarike yemasheya angayiphumezi kwiiseshoni zalo ezilandelayo zorhwebo. Akuyi kubakho khetho ngaphandle linda iinyanga ezimbalwa ukufikelela kwelona xabiso liphezulu kwaye lihambelana nenxalenye ephezulu yejelo lenkomo.
Ngayiphi na imeko, kwaye ngaphambi kokuba yenzeke, imeko yayo yobuchwephesha ibonisa ukuba ukulungiswa kwamaxabiso abo Ingakuzisa ukuya kuthi ga kwi-euro ezingama-22 okanye ngaphezulu. Intshukumo ekufuneka ithatyathwe ngabatyali mali ukuthatha izikhundla kwixabiso ngendlela enobundlongondlongo kunesiqhelo. Ngayiphi na imeko, kukho into ecacileyo esixelela ukuba xa ifikelela kwi-euro ezingama-26 iya kuba lixesha elichanekileyo lokuvala izikhundla kwaye onwabele inzuzo eninzi eyenziweyo kude kube lelo xesha linqwenelekayo elibonakala lisondele kwaye lisondele.
I-Cellnex ibuyela kuhlaselo
Alithandabuzeki elokuba le nkampani intsha ikwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain isenokuba yinto entle eyothusayo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi kwiintsuku ezizayo. Kungenxa yokuba ixabiso lale nkampani libuyela kulo Phakamisa emva kokuya kwiindawo zenkxaso, ukuxhathisa kwayo kwangaphambili. Ngayo into enomdla kakhulu ekwakhiweni kwayo enokuthi ikhokelele ekubeni ifikelele kumaxesha ayo aphakamileyo. Into engakhange ibalwe kulo nyaka uphelileyo nalapho abatyali zimali ababekwe kwixabiso baya konwaba.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba sesinye sezindululo zeemarike zentengiso eziye zaqhuba kakuhle kwezi nyanga zidlulileyo. Ukugqwesa nakwezona zona zitokhwe ziphakamileyo zeemarike zezabelo. Nangona kunokuthathwa ngokuzola okuncinci umlenze omtsha wokunyusa kusafuneka ihambile. Ewe kuya kuba kufanelekile ukulinda kancinci ngaphakathi kwexabiso elidwelisiweyo kuba ibhaso linokubaluleka kakhulu.
Amadeus, amaxabiso ngakumbi kwimarike yemasheya
Njengenye indlela yokugqibela, kukho inkampani enxibelelene necandelo lezokhenketho nelinika amandla amakhulu kwiiseshoni zokugqibela zorhwebo. Ndizithembile ukuba kuvavanyo lwakho lwangoku, akukho mathandabuzo ukuba iyakusivumela lungelelanisa iindawo ezithile zokuma phezulu kwaye ihlala iluncedo kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa. Ngomdla onomdla kakhulu wokuhlaziya abathengisi bokuthengisa. Ewe kuyakufuneka ulinde kancinci ngaphakathi kwexabiso elidwelisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » 4 iyothusa into yokuba ii-equities zaseSpain zisizisele
UBanco Sabadell ngomzuzu obuthathaka: ithengisa ngaphantsi kwe-euro
Ngaba kufanelekile ukuthatha imali mboleko?